प्रत्येक व्यक्ति आफ्नै तरिकामा प्रतिभाशाली छ - कसैले सजिलै संग सबै भन्दा कठिन गणितीय समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ, कसैलाई गुलाबको रचनाको साथ तामाङ्ग गर्दछ, र कसैले बच्चाहरूसँग कुराकानी गर्दछ। तर यी सबै प्रतिभाले के मूल्य खर्च गर्दथ्यो, जानकारी सम्झन हाम्रो क्षमता गुमाउँछ? दुर्भाग्यवश, मेमोरी अवरोधहरू त्यसोभए त्यसो भएन, निकै कम हुन्छ, र तिनीहरूका कारणहरूले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू सँधै सम्भव गर्न सकेन कि यो समस्या समाधान गर्नका लागि छिटो उत्तम उपकरण खोज्न सम्भव छैन।
मनोविज्ञानमा मेमोरी हानि
सबैले मेमोरी विकारहरूको बारेमा सुन्नुभयो, केही पनि यस घटनाको वैज्ञानिक नाम सम्झन्छन् - एमनेशिया। तर वास्तवमा, मनोविज्ञानमा मेमोरी हानिको प्रकार धेरै जान्दछन्। यसलाई तीन ठूलो समूहहरूमा विभाजित गर्न स्वीकृत छ।
आमनेशिया को जानकारी सम्झना, भण्डार र पुन: पेश गर्ने क्षमता को एक विकार हो। त्यहाँ धेरै प्रकारका अमेन्सहरू छन्।
पुन: पुनरुत्थान - चेतनाको अशांतिको क्षण अघि व्यक्ति प्राप्त भएको जानकारी पुन: उत्पन्न गर्न असक्षम।
Anterogradnaya - घटनाहरु को पुनरुत्थान को जटिलता जो खराब चेतना को प्रकरण पछि भयो।
Anteroretrogradarnaya - जानकारी को प्रजनन मा कठिनाइहरु एक मामला को चेतना को उल्लंघन संग पहिले र एक पछि पछि।
आंशिक मेमोरी विकारहरू, प्रायः भावनात्मक विकारहरूमा उत्पन्न हुन्छ, मेनु र उदास लक्षणहरूको निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ। यस्ता अवस्थाहरू दुई प्रकारका हुन सक्छन्: मेमोरी हानि (सम्मोहन) र स्मृति वृद्धि (हाइपरमिनेशिया)।
पारामेनिया - विकृत वा गलत सम्झनाहरू।
कन्फिब्युसन मेमोरीको फ्यूजन हो, वास्तविक सम्झना गर्न असक्षम कारण नक्कली घटनाहरूको प्रजननको लागी अग्रणी।
Pseudo-reminiscence एक मेमोरी विकार हो जसको घटनाहरु को घटनाक्रम बाधित छ। यसरी, अतीतका घटनाहरू वर्तमानको घटनाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
Cryptomnesia मेमोरीको विरूपण हो जुन व्यक्तिले अजनबियों, कार्यहरू वा विचारहरूलाई निषेधित गर्दछ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ मेमोरी विकारहरूको धेरै भिन्नताहरू छन्, र तिनीहरूको कारण पनि धेरै विविध छन्। एक सरल समझको लागि तिनीहरू धेरै समूहमा विभाजित छन्।
मस्तिष्क को पराजित, उदाहरण को लागि, स्ट्रोक, क्रेनियोस्रेब्रब्रल आघात या यसको क्यान्सर।
अन्य महत्वपूर्ण अंगहरुको काम को गिरावट, स्मृति हानि को लागी।
अन्य प्रतिकूल कारकहरू - निद्रा विकार, स्थिर तनाव , मानसिक तनाव बढ्यो र एक फरक जीवनशैलीमा परिवर्तन।
लागूपदार्थ, सोसाइटी, शराब र तंबाकूको पुरानो दुरुपयोग।
मेमोरी विकारहरू गुणात्मक छन्, तिनीहरूमध्ये धेरैजसो छोटो र उल्टाउने, कि अधिक कार्य, न्यूरोटिक प्रतिक्रियाहरु, लागूपदार्थ र शराब को प्रभाव को कारण हो। अन्यहरू, अधिक गम्भीर कारणहरूको कारणले गर्दा उपचारको लागि उत्तरदायी हुन्छन् धेरै गाह्रो हुन्छ। एक अत्यन्त गम्भीर मामला डेमेन्टिया छ - एक मेमोरी विकारकर्ता जोरदार ध्यान र सोच संग संयुक्त, व्यक्ति को अनुकूलन मा कमी को लागी, उसलाई अरुलाई निर्भर गर्दछ। त्यसोभए, यदि मेमोरी विकार पत्ता लगाइएको छ भने, एक विशेषज्ञलाई प्रारम्भिक आवेदन आवश्यक छ, चाँडै कारणहरू र उपयुक्त उपचार निर्धारण गरिन्छ, यो महत्वपूर्ण प्रकार्यको पूर्ण बृद्धि को अधिक मौका
ब्ल्याक ब्यान्ड जीवनमा
कसरी पारानोबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ?
मनोविज्ञानमा लिलाक रंग
मानव शरीरमा शराबको प्रभाव
महिलाको लागि मानिसको सहानुभूतिको गैर-गैरकानुसार संकेत
पुरानो फर्नीचर कसरी अद्यावधिक गर्ने?
ओक्सीले गुर्देको ढुङ्गाको साथ आहार
जन्मेको बेलिडोना संग मोमबत्तीहरू
रंगीन जीन्सहरूलाई के गर्ने?
गर्भावस्थाको समयमा अनिवार्य परीक्षण
10 संसारको सबैभन्दा सुन्दर र महंगा फूल, एक नजरको लायक
टुक्रा टुक्रा सीलेंट
रोबर्ट Downey जूनियर आयरन मैन को लागि विदाई बोली?
पाक कला बोर्ड बांसबाट बनाइएको छ
चेन्सी ट्यागेनले जॉन लीजेंन्डको लागि साम्राज्य निराशालाई पराजित गर्यो
कोकोबाट चकलेट क्रीम
Sekhlabateb नेशनल पार्क
बच्चाहरु मा हरियो स्नोट
विक्टोरिया र डेभिड बेकहमले टेनिस म्याचमा एस्टर मनाईयो